Noqosho Lacag Dib Loogu Yaqaano Safaarada!
Home » Barnaamijka Ambassador
Barnaamijka Dib-u-Celinta Farsamada Barnaamijka
Ma jeceshahay isticmaalka warbaahinta bulshada? Miyaad leedahay blog fayow? Ku raaxeysiga caawinta dadka lacag kaydiya? Haddii aad haa uga jawaabtay mid ka mid ah su'aalahaan, waxaan rabnaa inaad ku caawiso inaad ku faafiso ereyga ku saabsan Dib-u-Celinta Lacagta! Dib-u-bixinnada Fayadhowrka, waxaan ka soo baxeynaa tigidhada la isku xiro ee ugu fiican iyo heshiisyada internetka! Dib-u-Celinta Faa'iidooyinka Cawaariyeyaasha Brandid-ka waxay gacan ka geystaan ​​wadaagista wax-qabadkeena oo ku faafin ereyga ku saabsan boggeena.
Waxaan raadineynaa dadka ku nool Mareykanka iyo Kanada kuwaas oo si fiican loogu soo dhaweeyay bulshada caafimaadka iyo jir-dhiska. Waa inaad ka heshaa dareenka jirdhiska oo aad u firfircoon tahay warbaahinta bulshada sida Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, iwm. Waxaan ka aqbalnaa dadka dhamaanba meelaha jirdhiska ah oo ay ka mid yihiin dhiska jirka, iskutallaabta, dabeecada isku dhafka ah, yoga, pilates, zumba, saddexdaadadood, marathon, baaskiilad, sanduuqyo iwm.
Maxay tahay shaqadayda sida safiir?
Iyada oo loo yaqaan safar sare oo farsamo ah, waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad uga caawin karto kobcinta noocyadeena. Waxaad naga caawin kartaa inaad nala wadaagto adoo wadaagaya heshiisyadeenna, booga nala soo xiriiraya, kaararka kaararka ganacsiga, xirashada / qaadashada sawirada nashaadkeena, iwm. Ma leedahay fikrad u gaar ah dhiirrigelinta? Hubi inaad noo sheegto markaad nagu soo direyso email
Maxaan Tahay Inaan Noqdo Dib U Celinta Ciyaaraha Fududeeyaha?
Haddii laguu aqbalo barnaamijka amniga ee "Foster Rebates", waxaan kuu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah qalabka lacag la'aanta ah ee "FREE Fitness Restats" oo ay ku jiraan shaashadda BILAASH AH. Ka fiiri shaatigayaga annaga annaga dharkii page.
Dib-u-bixinnada Lacag bixinta ma bixisaa Lacagaha Lacagta Lacagta
Waqtigaan, Lacag Dib-u-bixinnada Lacag-bixinta ahi ma bixiso kafaalo-qaadasho lacageed.
Ma inaan haystaa Xirfadle xirfad leh si aan u dalbado Dib-u-Celinta Ciyaaraha Barnaamijka Amniga Barnaamijka?
Maya uma baahnid inaad noqoto cayaar xirfad leh. Waxaan dooranaa cayaartoyda nooc kasta ah.
Haddii aad u maleyneysid inaad naga fiicnaan laheyd, waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno! U dir email ugu dir Alex admin@fitnessrebates.com, adigoo isticmaalaya mawduuca emailka "Dib-u-Celinta Fududeeyaha Martigelinta. Ma ogtahay waxa la sheegayo? Noo ogolow naftaada iyo sababta aad u maleyneyso inaad ku fiicnaan laheyd nooca "Fitness Rebates". Ha ilaawin inaad ku darto hababkaaga warbaahinta bulshada si aan kuu eegno! Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan uga jawaabi karno codsiyada oo dhan, laakiin maaddaama mugga jawaabta, tani macquul ma noqon karto kiisaska oo dhan.
Raac Safiiradeena Muusikada ee Warbaahinta Bulshada:
July 28, 2014 Admin 2 Comments
fikirrada 2 on "Barnaamijka Ambassador"
Pingback: Blogger iyo Barnaamijyada Safiirada Stylish Momme
Pingback: Barnaamijyada Safaarada Ciyaaraha | Stylish Momme